Iimbadada, iWyndham, iMarriott kunye neHilton: Isitayile saseMelika saseCuraçao
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeCuracao Breaking News » Iimbadada, iWyndham, iMarriott kunye neHilton: Isitayile saseMelika saseCuraçao
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zeCuracao Breaking News • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Isandals® iRoyal Curaçao
Iimbadada, iWyndham, iMarriott kunye neHilton bayayiqaphela iCuracao yesiDatshi yeCaribbean enemibala kwaye bazimanya neeAirlines ukwenza iqela eliphumelelayo lokuzonwabisa kubakhenkethi baseMelika naseCanada.
Iinqwelo-moya zijoyina ibali lothando ngeholide ukuvumela abahambi baseMelika ukuba bafumane ikhefu kwi-COVID kwaye babe liDatshi eCuracao
Iimpawu ezifana neembadada, iWyndham kunye neHilton zonke zityala iflegi eCuraçao.
Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelo moya ukuya eCuraçao kubuyile kukujika okugcweleyo kwabahambi baseMntla Melika.
Iimfuneko zokungena kweCuraçao kunye neenkqubo ezikhuselekileyo zokuziqhelanisa ukuze zihambelane nemeko yokuhamba eguqukayo.
Isiqithi saseDutch Caribbean saseCuraçao kutshanje siye sabona ukunyuka kwezinto ezintsha kunye nokubizwa ngokutsha kwehotele exhaswa ziimpawu eziphambili zeendwendwe zehlabathi, kunye neendlela ezandisiweyo zokuhamba ngenqwelomoya. Ukusuka eMarriott ehlaziyiweyo ngokupheleleyo ukuya kwinqanaba lokukhetha konke okubandakanya amaphupha kunye neembadada, kunye neepropathi ezisandula ukuphawulwa ezinjengeTrademark nguWyndham kunye neCurio yiHilton Collection, iCuraçao inebhongo lokubonelela ngendawo yokuhlala eyahlukileyo eyamkela ukwanda kokuhamba kwabahambi baseMntla Melika. .
I-Curaçao Booms eneehotele ezintsha, iiNdiza eziNdisiweyo zabakhenkethi baseMelika naseKhanada
Lo ibingunyaka olomeleleyo wokwanda kwesi siqithi ngeemveliso ezinje ngeembadada, eWyndham naseHilton bonke betyala iflegi eCuraçao.
Kwasekuqaleni konyaka wama-2021, iSandals Resorts International yabhengeza ukuba izakuguqula indawo yangoku yeSanta Barbara Beach & Golf Resort Isandals® iRoyal Curaçao. Ukusekwa ukuqala ngasekupheleni kuka-2021, inguqu iya kuqala ibandakanya amagumbi anezinto ezingama-350 kunye nesuti eyolulwe ecaleni kweSpanish Water Bay kunye noLwandle lweCaribbean, ngolwandiso olucwangcisiweyo kule minyaka izayo. Izicwangciso ezinengqiqo zendawo yokuphumla zibandakanya ukongeza izinto eziphambili zokutyikitywa kwamaSandals, kubandakanya amachibi amatsha, iindlela ezahlukeneyo zokutya, indawo yokuhlala entle, kunye ne-River Suites ezisandula ukwakhiwa. Iindwendwe ziya kuba nakho ukufikelela kumdyarho wegalufa we-Pete Dye wobumelwane, ii-marinas ezimbini kunye ne-18-square-foot ngaphakathi nangaphandle komnyhadala nendawo yokuhlangana-eyona inkulu kwesi siqithi ukugqitywa. ISandals® Royal Curaçao iyaqhubeka ukuthengiswa ngo-Agasti 38,000, 4 kwaye imiselwe ukuba ivule ngokupheleleyo ngo-Epreli 2021, 14.
Ngomhla ka-Meyi ka-2021, i-Kunuku Aqua Resort yaba yinxalenye yoQokelelo loRhwebo ngu-Wyndham portfolio, ingqokelela ye-soft-branded top-midscale nangaphezulu kweehotele ezigcina umoya wazo wokuzimela nokuzimela. Indawo yokuphumla iqhubeka ngoku nangaphandle nangaphakathi, kubandakanya onke amagumbi kunye namagumbi, emiselwe ukugqitywa ngo-2022.
Okokugqibela, ngoJuni ka-2021, uHilton wabhengeza ukusayinwa kwe-Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort njengepropathi entsha yokujoyina ingqokelela yeCurio yi-Hilton portfolio. Iphethwe liqela laseCorendon, indawo ebandakanya wonke umntu kulindeleke ukuba iguquke ngoSeptemba 2021 kwaye izakumisela ubukho bukaHilton kwesi siqithi. Kwisahluko sayo esilandelayo njengepropathi yokuQokelelwa kweCurio, iMangrove Beach Corendon Curaçao Irizothi iya kubonelela ngamava aphucukileyo kubahambi abanomdla, ngelixa ikwalungiselela abo bafuna indawo ezolileyo yeCaribbean.